Nhau - Zviri nani here kunwa mvura mune yakakwira borosilicate girazi kana yakajairwa girazi?
Kubva payakazvarwa, borosilicate girazi teacup yakafarirwa zvakanyanya nevanhu. Icho chimwe chezvinhu zvinodikanwa zvehupenyu hwepamba, iine kujekesa kwakanyanya, kurwisa kwembabvu, kumeso kwakatsetseka, kuchenesa nyore, uye hutano.
Nekudaro, mibvunzo yakawanda yakamutswa chinyararire, "Inogona here borosilicate magirazi makapu angave ane chepfu? High borosilicate girazi kunwa mvura silicon ichanyungudika" zvichingodaro. Saka yakakwira borosilicate girazi kuti unwe pakupedzisira haina kunaka, zvinotevera ini ndinokutora iwe kuti ududzire iyo yakakwira borosilicate girazi.
Yakakwira borosilicate girazi iko kushandiswa kwegirazi mune mamiriro eakanyanya tembiricha inoitisa hunhu, kuburikidza neyemukati kudziyisa kuti uone girazi rinonyungudika, saka, iri mhando yakaderera inflation, yakakwira tembiricha inodzivirira, yakakwira simba, yakakwira tembiricha, yakakwira kuomarara, yakakwira mwenje transmittance uye Yakakwira Chemical kugadzikana yakasarudzika girazi zvinhu, nekuda kwekuita kwayo kwakanyanya, yakakwirira borosilicate zvinhu zvegirazi makapu zvine zvakanakira zvakajairika girazi mukombe hazvigone kupa.
Yakajairwa girazi mukombe
Yakajairwa girazi teacups zviri nyore kusaenzana mukupisa, zvichikonzera kwakasiyana tembiricha yechikamu chimwe nechimwe. Nekuda kwesimba rekuwedzera uye kudzvinyirira muchando uye kupisa, kana isina kuenzana mukudziya uye musiyano wakakura kwazvo, girazi iri nyore kupaza.Panguva imwecheteyo, girazi kupisa kwakawanda hakusi kukwirira, kwakanyanya tembiricha zvakare kuri nyore kuita iyo girazi raputswa
High borosilicate girazi mukombe
Iyo yepamusoro borosilicate girazi teacup inogadzirwa nekupfura pakakwirira tembiricha, iyo inogona kuenderana neakanyanya tembiricha uye yakaderera tembiricha. Iyo 100 water inopisa mvura haizoputsika, uye hapana kuwedzera kwekushisa uye kutonhora kutapudza kunowanzoonekwa mune zvakajairika zvinhu.Tea, asidhi zvinwiwa uye zvimwe zvinwiwa zvinopihwawo zvisina hunhu uye husina kunaka. Zvikurukuru, yakakwira borosilicate inguva yakakosha girazi zvinhu zvine yakakwira kugadzikana kwemakemikari, uye hapana chinhu chakadai sekusungunuka kwesilicon Uyezve, makapu egirazi akakwirira ari nyore kuchenesa uye kusangana nemazinga ekuchengetedza.